कसरी अघि बढ्ला मेस्सीविनाको बार्सिलोना ? - Nagarik Today
होम » कसरी अघि बढ्ला मेस्सीविनाको बार्सिलोना ?
कसरी अघि बढ्ला मेस्सीविनाको बार्सिलोना ?
by नागरिक टुडे साउन २५, २०७८
काठमाडौँ- लियोनल मेस्सी र बार्सिलोनाबीच नयाँ सम्झौता नहुने खबर सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा सन्नाटा छायो । बार्सिलोनाका खेलाडीहरू सदस्य रहेको ह्वाट्सएप ग्रुपमा पनि कसैले बोल्ने हिम्मत गरेन । तर यस्तो स्थिती धेरैबेरसम्म रहन सक्दैन थियो । केही बेरपछि मेस्सीलाई सम्मान र शुभकामनाका सन्देश आउन थाले ।
मेस्सीका लागि सबैभन्दा पहिलो सन्देश आयो, कार्लोस पुयोलबाट । बार्सिलोनामा यत्तिका वर्ष खेलेकामा पुयोलले मेस्सीलाई धन्यवाद दिए । पूर्वकप्तानको सन्देश देखेपछि अरुले पनि सामाजिक सञ्जालमा सन्देश पोस्ट गर्ने हिम्मत गरे ।
तिमीले सन् २००५ मा पहिलो गोल गर्दा भाग्यवस म क्याम्प नौउमै थिए । त्यसबेला मैले सोचेको थिइँन, कि कुनै दिन हामी सँगसँगै खेल्नेछौँ । र, केही नबोली नै हामीले एक अर्काको मुभ बुझ्ने छौँ,’ जोर्डी अल्बाले लेखेका छन् । अल्बापछि मेस्सीका लागि सन्देश लेख्ने पालो थियो, सर्जी रोबर्टोको । ‘प्रत्येक क्षण र गोलका लागि धन्यवाद,’
मेस्सीले बार्सिलोनासँगको २१ वर्ष लामो सहयात्रा टुंगाउँदै थिए । उनी अब बार्सिलोनमा रहने छैनन् भन्ने खबर धेरैका लागि अपत्यारिलो थियो । कोपा अमेरिका जितेपछि विश्राममा रहेका मेस्सी फेरि बार्सिलोना फर्कने छैनन् भन्दा उनका साथीहरू खिन्न भए । न त मेस्सी नै खुशी थिए । किनभने उनले आफ्ना समर्थकहरूसँग बिदा माग्ने मौका पाउने स्थिती भएन । ती समर्थकहरू क्याम्प नौउ पुग्ने वातावरण भएन । जहाँ उनीहरूको मेस्सीसँग नजर जुध्ने थियो ।
आइतबारको बिदाइसँगै बार्सिलोनामा मेस्सी युगको अन्त्य भएको छ । मेस्सी अब कता जालान् भन्ने प्रश्न गरिरहँदा अर्को सवाल पनि छ । त्यो भनेको, मेस्सी विनाको बार्सिलोना कसरी अघि बढ्छ ? भन्ने हो । उसै पनि पछिल्ला सिजनहरूमा बार्सिलोना मेस्सीप्रति बढी नै आश्रित थियो । हुन त नेयमारको बर्हिगमन पछि नै मेस्सीले बोक्ने वजन बढेको हो ।
संयोगबस् यी दुवै खेलाडी फेरि एकपटक एउटै जर्सीमा देखिन सक्छन् । मेस्सी पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) जाने हल्ला चर्केको छ । उसो त यो हल्ला नयाँ होइन । मेस्सी र बार्सिलोना नयाँ सम्झौताका लागि छलफलमै रहेका बेला पनि युरोपेली सञ्चार माध्यमहरूले लेखिरहेका थिए ‘मेस्सी पेरिस जान सक्छन्’ । मेस्सीले बार्सिलोनामा थप दुई वर्ष खेल्ने निर्णय गर्नेछन् भन्ने अनुमान भइरहेका बेला जोआन लापोर्टाले घोषणा गरिदिए, कप्तानले क्याट्लोनिया छाड्दैछन् ।
विगतमा पनि कयौँ खेलमा मेस्सी बार्सिलोनाको टिममा हुँदैन थिए । ती खेलहरूमा बार्सिलोनाले गोल गर्न नसक्दा भन्ने गरिन्थ्यो, ‘मेस्सी भएको भए,’ । अब त यो वाक्य प्रयोग पनि खास अर्थ छैन । किनभने मेस्सी अब केही खेलका लागि मात्र उपलब्ध नहुने होइनन् ।
मेस्सीको अनुपस्थितीले बार्सिलोनामा दुई किसिमको प्रभाव पार्न सक्छ, सकारात्मक र नकारात्मक । हुन त भन्न सकिएला, कुनै पनि कदमले ल्याउने नतिजा यिनै दुईवटा हो । यही सत्य हो । बार्सिलोनामा पनि यही दुईमध्ये एक किसिमको प्रभाव पर्नेछ ।
मेस्सीलाई विश्व फुटबलको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी नमान्नेको भन्दा मान्नेको संख्या धेरै छ । स्पेनी ला लिगा र बार्सिलोनामै पनि उनको कद कति अग्लो रह्यो, हामीले देखेकै हो । के पनि भन्ने गरिन्छ भने, मेस्सीसँग खेल्न कयौँ खेलाडी धक मान्थे । सायद नर्भस हुन्थे कि ? जस्तै, एन्टोइन ग्रिजमन । अनि फिलिप्पे कौउटिन्हो पनि । फेरि यी तीनै खेलाडी एउटै ‘स्पेस’मा खेल्न रुचाउँछन् । ठ्याक्कै स्ट्राइकर पछाडि । वा दाँया र बाँया विङबाट विपक्षीको क्षेत्रमा बल लिएर आउन । यसकारण मेस्सी र ग्रिजमन वा मेस्सी र कौउटिन्होलाई सँगै खेलाउनु त्यति सजिलो काम होइन ।
अहिलेको आधुनिक फुटबलमा खुबै चलेको रणनीति हो, ‘प्रेसिङ’ । विपक्षीलाई बल खोस्नै नदिने । उनीहरुले बल खोसिहाले के गर्ने त ? ‘प्रेस’ गर्ने । मतलब, उनीहरूले बल नगुमाउन्जेल दवाब दिइरहने । यस्तो रणनीति मेस्सीका लागि खासै उपयुक्त होइन भन्ने गरिन्छ । यसकारण मेस्सी सहितको बार्सिलोनाले ‘प्रेसिङ’ फुटबल खेल्न सकेन । अब भने यो शैली बार्सिलोनाले प्रयोगमा ल्याउन सक्छ । यद्यपि यसका लागि मेम्पिस डिपे तयार रहनुपर्छ ।
कयौँ वर्ष बार्सिलोनाको रणनीति यस्तो रह्यो, मेस्सीको वरिपरी रहेर खेल्ने । मेस्सीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक खेल्न दिने । अब रोनाल्ड कुमनले आफूले चाहेको जस्तो रणनीति बनाउन सक्छन् । अबका दिनमा बार्सिलोना एउटा खेलाडीको भरमा होइन, शैली र संरचनाको भरमा चल्न सक्छ । त्यसैले लापोर्टाले भनेको हुसक्छ, ‘कुनैपनि खेलाडी भन्दा क्लब ठूलो हो,’ तर भन्नैपर्छ, पछिल्लो दशक मेस्सी नै ठूलो थिए ।
आउँदो सिजन बार्सिलोनाले कसरी खेल्ला भन्ने अनुमान भइरहँदा, डिपेको भूमिका उल्लेख्य रहनेछ भन्न सकिन्छ । उनी टिमका ‘क्रिएटिभ लिडर’ हुन सक्छन् । स्वतन्त्रतापूर्वक खेल्ने, गोलका मौका सिर्जना गर्ने र आफैँ पनि गोल गर्ने ध्येयमा डच खेलाडी हुनेछन् । उनीभन्दा पछाडि रहेर खेल्ने खेलाडी हुनेछन्, ग्रिजमन । उसै पनि ग्रिजमनलाई मनपर्ने भूमिका ‘सेकेन्ड स्ट्राइकर’ नै हो ।
मेस्सीको बर्हिगमनले अन्य युवा खेलाडीका लागि पनि सिनियर टिमको ढोका खोल्न सक्छ । ती खेलाडी हुन्, एलेक्स कोलाडो, युसुफ डेमिर र रिकी पुएच । अनि चोटमुक्त हुँदै गरेका अन्सु फाती पनि । म्यानचेस्टर सिटीबाट बार्सिलोना पुगेका सर्जियो अग्वेरो र पहिलेबाटै त्यही रहेका औसमाने डेम्बेले पनि त छन् । यद्यपि डेम्बेले केही महिनाका लागि मैदान बाहिर नै रहनेछन् ।
केही वर्षदेखि नै महसुस गरिएको कुरा के हो भने, बार्सिलोनामा पुर्ननिर्माणको आवश्यकता छ । नयाँ अनुहारहरू थप्नु पर्नेछ । जसले बार्सिलोनालाई पुर्नजागृत गरोस् । तर यस्तो योजना ३४ वर्षीय मेस्सी रहुन्जेल कति सम्भव हुन्थ्यो ? सायद यही प्रश्नले बार्सिलोना डराइरहेको थियो ।
मेस्सीले क्लब छाडेसँगै बार्सिलोना यो प्रश्नको उत्तर दिन तयार भएको छ । बार्सिलोनाको मिडफिल्ड अहिले पनि निकै बलियो छ । पाका सर्जियो बुस्क्वेट्स र युवाद्वय फ्राङ्की डे योङ र पेड्री सम्मिलत बार्सिलोनाको मिडफिल्ड हेर्न लायकको छ । किशोर गाभी र निको गोन्जालेज आफ्ना अग्रजलाई साथ दिने सम्भावना उत्तिकै छ । यसअर्थमा मेस्सी विना पनि बार्सिलोना रोमाञ्चक टिम हुनसक्छ । यसका लागि बार्सिलोनासँग पर्याप्त खेलाडी छन् । फेरि मेस्सीलाई दिनुपर्ने तलब पनि त बचत हुन्छ । बचत पनि करौडौँ युरो बराबरको ।
तर यति हुँदाहुँदै पनि मेस्सी विनाको बार्सिलोनाले झेल्नुपर्ने समस्या थुप्रै छन् । टिममा अझै पनि सामुएल उमटिटी र मिरालक प्यानिक जस्ता मंहगा खेलाडी छन् । यीनलाई बेच्न बार्सिलोना संर्घषरत छ । क्लबको खर्च कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेका बेला यी खेलाडी कुमनको टिममै रहने हुन् भने, लापोर्टाको टाउको दुखिरहनेछ ।
आर्थिक समस्यामा फसेको बार्सिलोनाका लागि क्याम्प नौउ आम्दानीको प्रमुख स्रोतमध्येको एक हो । तर आउँदो सिजन क्याम्प नौउमा पूर्ण क्षमतामा हुनेछैन । किनभने यसको पुर्ननिर्माण सकिएको छैन । अनि बार्सिलोनाका खेलाडीहरू तलब कटौतीमा सहमत हुन्छन् भन्ने पनि छैन । जसले लापोर्टाको खर्च कटौतीको योजना कार्यन्वयन नहुन सक्छ ।
मेस्सीसँग बार्सिलोनाका समर्थकहरू भावानात्मक रुपमा जोडिएका छन् । बार्सिलोनाका खेलाडीहरू नै पनि मेस्सी समर्थक हुन् । उनीहरू पनि आफ्ना पूर्व कप्तानको बर्हिगमनले भावुक र दुखित छन् । यस्तोमा टिमको मनोबल खस्कन सक्छ । फेरि मेस्सी युरोपेली प्रतिद्वन्द्वी क्लब जाँदा थप निराश हुनेछन् यी खेलाडीहरू ।
केही सिजन यताको प्रदर्शन हेर्ने हो भने, बार्सिलोनालाई युरोपेली क्लब फुटबलमा शीर्ष क्लबमध्येको एक मानिन छाडिएको छ । फेरि बार्सिलोनाको आर्थिक अवस्थाले पार्ने प्रभाव त छँदैछ । उसले अर्को क्लबको स्टार खोस्न सकने अवस्था छैन । जसरी उसले लुइस स्वारेजलाई लिभरपुलबाट खोसेको थियो । बार्सिलोनाका प्रायोजकहरूले पनि भन्न सक्छन्, अब तिमीसँग मेस्सी छैनन् । त्यसकारण हामी उही स्तरको प्रायोजन गर्न सक्दैनौँ ।
नयाँ सिजन सुरु हुनै लाग्दा अर्को चिन्ता पनि छ , बार्सिलोनाका नयाँ वा युवा खेलाडीहरूले कस्तो प्रदर्शन गर्छन् ? बुस्क्वेट्स र जेरार्ड पिके करियरको उत्तर्राद्धमा पुग्दै गर्दा, उनीहरुको स्थानमा को ? भन्ने प्रश्न पनि छ । युवा रक्षकद्वय एरिक गार्सिया र एमरसनले च्याम्पियन्स लिगमा ठूला क्लबलाई रोक्न सकछन् वा सक्दैनन् भन्ने चिन्ता छ । यसकारण कुमनका अगाडि ठूलो चुनौति छ, सर्वोत्कृष्ट खेलाडी विनाको बार्सिलोनालाई कसरी बलियो बनाउने ।
बार्सिलोनाका लागि मेस्सी कति महत्वपूर्ण रहे भन्ने प्रश्न धेरैले सोध्न सक्छन् । यसको जवाफ पिकेले दिएका छन् । ‘जब मेस्सी टिममा हुन्छन्, हामी मानसिक रुपमा पनि बलियो हुन्छौँ । तर उनको अनुपस्थितीमा पनि त हामीले खेल्नुपर्छ । त्यसकारण उनीविना पनि उत्तिकै बलियो प्रदर्शन गर्न प्रयास गर्छौ,’ पिकेले केही वर्षअघि भनेका थिए । पिकेले भनेजस्तै बार्सिलोनाले मेस्सीविना पनि उस्तै बलियो खेल देखाउने बेला आएको छ । त्यो पनि सधैँका लागि ।गोल डटकमबाट
lionel messiमेस्सीविनाको बार्सिलोना
उत्तर कोरियाद्वारा चीनको भ्याक्सिन अस्विकार
भारतको इतिहासमा पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतमा ९ न्यायाधीशको सपथ
डेल्टा भेरियन्टको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्ने पहिलो देश बन्दै चीन
अफगान महिला फुटबल खेलाडीको उद्धार गर्न फिफाको आग्रह
अफगानिस्तानबाट उडेको अमेरिकी विमानमा जन्मियो बच्चा
अफगानिस्तान द्वन्द्वः के राष्ट्रनिर्माणका लागि गरिएको दुई दशकको लगानी खेर गएको हो?
अफगानिस्तान द्वन्द्वः तालिबान लडाकुहरूको नियन्त्रणमा आएपछि राजधानी काबुल
चार्टर्ड जहाजमा काठमाडौं आइपुगे अफगानिस्तान गएका १२७ नेपाली
काबुल विमानस्थलमा गोली चल्यो, ३ को मृत्यु